Pattern Alterations – Tailoress The
Isbedelka hureen a on Qaabka a
Altering a Neckline on a Pattern Gaping Neckline Cut along a straight line from the neckline to the waist dart point and then through the center of the waist dart. Wareeji in ay soo gaabin dhererka hureen ah. hoto dhexda The markaas xaka. Dib-u-aadka kama tollayn-khadadka. Large Neck Lower the neckline, removing it from the […]
Abuuritaanka Cowl Neck a
Cowl Neck Si qabsato hannaankii bodice aasaasiga ah si ay u abuuraan qoorta cowl ah: 1. Bedelka iyo hoto dhaceen in tollayn dhanka ah by jarida in dhibic isku dhaceen oo ku dhow ilaa iyo hoto dhaceen asalka. 2. qaado qiyaastii 1 inch from the shoulder point at the neckline and draw a straight line to create a […]
Isbedelka Qaababka darafkii
Ferjiga bowdada ama sinaha ilaa yaree in hipline ka hemline ah. Ka dhig isku midka ah si kama tollayn dhinaca. piece this dhaqaaji qadarka la doonayo, ka dibna dib-u-dhaansado kama tollayn dhinaca. Flat Derriere To alter the pattern to fit snugly around the back, cut directly down the back dart to the hemline and then […]
Isbedelka Qaabka Bodice a – isku dhaceen
Isbedelka Qaabka Bodice a – Isku dhaceen Full dhaceen yaree iyada oo xarunta ka mid ah gantaal hore ka dibna guud ahaan isku dhaceen line. Soor ee lacagta looga baahan yahay iska ilaalinta iskusoo noqnoqonaya ee kama tollayn garabka. Dib-u-soo jiidi ah kama tollayn-khadadka iyo hub la dhibcood dhexe inay kala ah. High Bust Cut along the bust-line to […]
Isbedelka Arms on Qaabka a
Isbedelka Arms on Gacan Qaabka a Large jar weheliyaan line xarunta iyo furto meel xaddiga loo baahan yahay. Ku dar tirada furitaanka badhka hore iyo dib kooxda tollayn. Large cududda sare Isticmaalka qiyaas cajalad on dhinaca a, qiyaastaa meel dhererkeedu yahay dhererka darafta sare. Goo […]